bollywood | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 4
Home >> bollywood (page 4)
शाहरुख खानले ‘जिरो’ फ्लप भएपछि नयाँ फिल्म साइन गर्ने समय लिने बताए
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको फिल्म ‘जिरो’ को असफलताले उनीमाथि निकै गहिरो प्रभाव पारेको छ । यही कारण उनी अहिले कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्ट साइन गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।
शाहरुख खानले अगाडि भने ‘म तब मात्रै नयाँ फिल्म गर्नेछु जब मेरो मन भित्रैबाट आवाज आउनेछ मैले अब फिल्म गर्नुपर्छ । मैले १५/२० स्टोरीहरु सुनिसकेँ र ती मध्ये २/३ वटा राम्रो पनि लागेका छन। तर अहिलेसम्म मैले निधो गरेको छैन म कुन फिल्म गर्छु । किनकी मैले निर्णय लिने बित्तिकै काम गर्न पनि सुरु गरिदिनेछु । त्यस पछि म त्यही काममा तल्लीन हुनेछु ।’
बलिवुड अभिनेता ऋषि कपुरलाई क्यान्सर भएको खुलासा भएको छ । पछिल्लो सात महिनादेखि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा उपचार गराइरहेका ऋषि कपुरलाई के भएको भन्ने अहिलेसम्म खुलेको थिएन ।
बलिउडका चर्चित निर्देशक रामगोपाल बर्मा प्रहरी हिरासतमा
बलिउडका चर्चित फिल्म निर्देशक रामगोपाल बर्मालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । निर्देशक बर्मालाई आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले हिरासतमा लिएको उनले आफ्नो सामाजिक संजालबाट जानकारी दिएका छन् । उनको नयाँ फिल्म लक्ष्मीज एनटिआरको प्रेस कन्फेरेन्सका लागि आन्ध्रप्रदेशको विजयवाडा जानेक्रममा उनलाई सो फिल्मका निर्मातासहित प्रहरीले हिरासतमा लिएको बताइएको छ ।
बर्माले बनाएको फिल्म पछिल्लो केहि समयदेखि नै विवादमा रहेको थियो । फिल्म आन्ध्रप्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री नंदमुरी ताराको जीवनीमा आधारित रहेको बताइएको छ । फिल्मको विवाद अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । आन्ध्रप्रदेश हाई कोर्टले फिल्मलाई आन्ध्रप्रदेशमा रिलिज गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तेलंगानासहित अन्य ठाउमा प्रदर्शन भइसकेको छ भने आन्ध्र प्रदेशमा मे १ मा रिलिज हुनेक्रममा रहेको छ ।
प्रहरीले भने कानुन व्यवस्था बिग्रिने डरले उनलाई हिरासतमा लिइएको बताएको छ । प्रहरीले बर्मालाई एयरपोर्टमा नै नोटिस दिएको, जसमा दण्ड संहिताको धारा ३० र धारा १४४ अनुसार सार्वजनिक प्रेस कन्फेरेन्स गर्न नपाइने भन्दै हैदरावाद फर्किन भनेको थियो । तर बर्माले फर्किन अश्विकार गरेपछि हिरासतमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बर्माले भनेआफ्नो आवाजलाई दबाउन आफुलाई गिरफ्तार गरिएको बताउदै आजको प्रेस कन्फेरेन्स रद्ध भएको जानकारी दिएका छन् । उनले होटल बुकिंग गर्दा समेत प्रशासनले फिल्मसँग सम्बन्धित कसैको पनि बुकिंग नलिन निर्देशन दिएको आरोप लगाएका छन् ।
बलिउड नायक बरुण धवन प्रेमिका नताशा दलालसँग बिबाह गर्दै
बलिउड नायक बरुण धवनले यसै वर्ष आफ्नी प्रेमिका नताशा दलालसँग बिबाह गर्ने भएका छन् ।भारतीय मिडियाकाअनुसार बरुण र नताशा आगामी वर्ष बिवाह गर्ने तयारीमा थिए । तर, दुबैको परिवारलाई यो कुरा मन्जुर भएन । दुबै परिवारको सल्लाहपछि यसै वर्ष उनीहरुको बिबाह हुने पक्का जस्तै भएको छ । केही दिनमा नै दुई परिवार मिलेर बिबाहको मिति पक्का गर्नेछन् ।
सलमान खानको सुपरहिट फिल्म ‘तेरे नाम’को सिक्वेल बन्ने
सलमान खानको सुपरहिट फिल्म ‘तेरे नाम’को सिक्वेल बन्ने भएको छ। एक पागल प्रेमीको रुपमा सलमानको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्मले हरेक प्रेम जोडीलाई मोहित पारेको थियो। २००३ सालमा बनेको यस फिल्ममा सलमानको ‘हेयर स्टाइल’को पनि निकै चर्चा भएको थियो।
उनका फ्यानले सो ‘हेयर स्टाइल’लाई निकै फलो गरेका थिए। धेरैबाट फिल्म अधुरो रहेको गुनासो आइरहेका बेला डाइरेक्टर सतीश कौशिकले सिक्वेलको घोषणा गरेका हुन्। फिल्ममा सलमान खेल्ने या नखेल्ने भन्नेबारे भने निश्चित भएको छैन।
सतीश र सलमानले निकट भविष्यमा रिलिज हुने फिल्म ‘भारत’मा सँगै काम गरेका थिए। शतीसले भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘हो म फिल्मको दोस्रो पार्ट बनाउन गइरहेको छु। यो प्रेम कथामा आधारित हुनेछ। योभन्दा धेरै अहिल्यै केही भन्न सक्दिनँ।’ फिल्म २०१९ को अन्त्यसम्म तयार पार्ने तयारी रहेको समेत समाचार छ।
कलंकमा राम्रो स्टारकास्ट र दमदार अभिनय हुँदा हुँदै पनि किन रुचाएनन् ?
करण जोहरको मल्टिस्टारर फिल्म कलंकले बक्स अफिसमा राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छैन । यो फिल्ममा आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दिक्षित, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा र आदित्य रोय कपुर मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्मबाट सबैले निकै अपेक्षा गरेका थिए तर पहिलो विकेन्डमा यसले ६६.३० करोड भारु मात्र कमाउन सफल भयो ।
हालै जब एक कार्यक्रममा आलिया भट्टलाई फिल्म फ्लप भएको कारण सोध्दा उनले यसको विश्लेषण नगर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘फिल्मको विश्लेषण मैले गर्ने होइन, यसको आवश्यक पनि छैन । जनताको अदालत सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । ’
उनले थपिन्, ‘यदि दर्शकले फिल्म स्विकारेका छैनन् भने यसको अर्थ यो हो कि फिल्मले साँच्चै नै केही विशेष जादु देखाउन सकेन । हामीले मात्र यसलाई स्विकार गर्नुपर्छ र पछिका लागि पाठ सिक्नुपर्छ ।’
कलंकमा राम्रो स्टारकास्ट र दमदार अभिनय हुँदा हुँदै पनि मानिसहरुले यसलाई किन रुचाएनन् ? यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो फिल्मको कहानी । फिल्मको कहानी निकै ढिलो गरी अघि बढ्छ । साथै यो फिल्म निकै लामो छ । अभिषेक वर्मनले यसको निर्देशन गरेका छन् भने करण जोहरले फिल्ममा १५० करोड भारु खर्च गरेर बनाएका छन् । तर फिल्म रिलिज भएको पाँच–६ दिन बितिसक्दा पनि लगानीको आधा रकम पनि उठाउन सकेको छैन ।
रोहित शेठ्ठीको फिल्म सूर्यावंशीमा अक्षयकुमारको पत्नी बन्दै कट्रिना कैफ
बलिवुड अभिनेत्री कट्रिना कैफले फेरी एक पटक अक्षयकुमारसँग फिल्ममा काम गर्ने भएकी छन् । कट्रिनाले चर्चित फिल्म निर्देशक रोहित शेठ्ठीको नयाँ फिल्म सूर्यावंशीमा अक्षयकुमारको पत्नीको भूमिका निभ्याउने भएकी छन् ।
कट्रिना आफैले सामाजिक संजालमा निर्देशक रोहित, निर्माता करण जोहर र अक्षयकुमारसँगको एक तस्वीर सार्वजनिक गर्दै सो कुराको पुष्टि गरेकी हुन् । कट्रिनाले सूर्यबंशी टिममा जोडिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै रोहित शेठीसँग पहिलो पटक काम गर्ने मौका पाएकोमा उत्साहित भएको बताएकी छन् ।फिल्ममा अजय देवगन र रनबीर सिंहको समेत विशेष भूमिका हुने बताइएको छ ।
अक्षयकुमार र कट्रिना एक समयका अत्यन्त सफल जोडी मानिन्छन् । उनीहरुले सिंह इज किंग, वेलकम, नमस्ते लन्डन, दे दनादन, हमको दिवाना कर गए जस्ता सफल फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका छन् । पछिल्लो पटक दुवैले सन् २०१० मा तीस मार खानमा अभिनय गरेका थिए । यो फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप भएको थियो ।अब दुवै करिब १० बर्षपछि फेरी सँगै पर्दामा आउने भएका छन् । फिल्म सूर्याबंशी २०२० को जुलाई ३० मा रिलिज हुदै छ ।
सलमान खान अभिनित बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘भारत’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
सलमान खान अभिनित बहुप्रतिक्षित बलिउड चलचित्र ‘भारत’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।जून ५ मा रिलिज हुने तयारीमा रहेको सलमान खान स्टारर फिल्म ‘भारत’ को ट्रेलर सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा सलमानलाई बिभिन्न अलग अलग लुक्समा देखाईएको छ । ट्रेलरमा देश प्रेमको कथा देखाईएको छ । यस्तै एक्सन रोमान्स र कमेडीले पनि ट्रेलरमा स्पेस पाएको छ ।फिल्ममा सलमानले भारतको भूमिका निभएका छन् ।फिल्ममा भारतको जिन्दगीको ७१ वर्षको यात्रा देखाइएको छ ।
ट्रेलरको शुरुवातमा नै सलमान र दिशा पाटनीलाई देखाईएको छ । दिशालाई सर्कसमा देखाईएको छ भने सलमानमा सोही सर्कसमा मौत का कुवामा कला देखाईरहेको देखाईएको छ । ट्रेलरमा कटरीनालाई सलमानको प्रेमिकाको रुपमा देखाईएको छ भने दिशा ज्याकी श्राफ बुवा र सुनील ग्रोवरलाई साथीको भूमिकामा रहेका छन् ।
अली अब्बास जफरको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म ट्रेलरको सुरुवात भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संवादबाट भएको छ । ट्रेलरमा समावेश सम्बादहरु दमदार रहेका छन् । फिल्मको ट्रेलरलाई निकै मसालेदार बनाईएको छ ।
फिल्मको ट्रेलरले निकै राम्रो रेस्पोन्स पाईरहेको छ । फिल्मको ट्रेलर र सलमानको कामको शहरुख खानले खुलेर तारिफ गरेका छन् । यस्तै अन्य सेलिब्रेटीहरुले पनि ट्रेलर दमदार बनेको प्रतिकृया दिईरहेका छन् ।
संजय लिला भंसालीको फिल्म खेल्न सलमान खानको शर्त
यतिबेला बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान र निर्माता तथा निर्देशक संजय लिला भंसालीको सम्बन्धबारे नयाँ प्रसंग चर्चामा छ । यी दुई नाम १९ वर्षपछि एक ठाउँमा आउँदैछन्। फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ मार्फत्। यसका लागि पनि सजिलो थिएन। भंसालीले धेरै सोचविचार गरेर सलमानलाई यो फिल्मका लागि राजी बनाए। भने जति पारिश्रमिक दिए। नाफाको हिस्सामा पनि कुरा मिल्यो। दुःखको कुरा के भयो भने, सलमानकै कारण संजयले उहिल्यैदेखि उनलाई साथ दिँदै आइरहेका संगीतकर्मी तथा गायक अरजित सिंहलाई यही फिल्मबाट गुमाउनु पर्यो।
भारतीय मिडियाहरु भन्छन्, सलमान र अरजितको सम्बन्धको चिसोपन छाम्ने हो भने २०१३ मा भएको एउटा अवार्ड समारोहसम्म पुग्नुपर्छ। त्यो अवार्र्ड कार्यक्रममा गायक अरजितलाई सलमानले हास्यपात्र बनाउन खोजेपछि दुबै जनाबीच सम्बन्ध पातलिएको हो। सो कार्यक्रममा गायक अरजित सिंह बेस्ट सिंगर अवार्ड लिन स्टेजमा उक्लेका बेला सलमानले उनलाई ‘तिमी ढिला आयौ, निद्राबाट ब्युँझेर आएको हो कि के हो?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा जवाफमा अरजितले पनि सलमानलाई उडाउने प्रयत्न गरे। भने, ‘म सुतेको होइन तिमीहरुले सुतायौ।’
सलमानले फेरि अरजितलाई प्रहार गरे, ‘जब तिमी गीत गाउँछौ मानिसहरु सुत्न सक्दैनन्।’ अन्ततः यो नोकझोक चिसो सम्बन्धमा बदलियो। र, त्यसको प्रभाव अहिले आएर ‘इंशाअल्लाह’मा देखियो। आफ्ना प्रिय निर्मातासँग उनले काम गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनपर्यो।
‘बाहुबली’को कट्प्पासग ऐश्वर्या रायको जोडी बन्ने
ब्लकबस्टर सिनेमा ‘बाहुबली’मा कट्प्पाको भूमिका गरेर चर्चा बटुलेका अभिनेता सत्यराजले मणिरत्नमको निर्देशनमा बन्ने एक सिनेमामा पूर्वविश्वसुन्दरी एवम् अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको जोडी बन्ने भएका छन् ।
‘पोन्निनी सेल्वम’ नामक सिनेमामा दुबैले एकअर्कासँग रोमान्स गर्नेछन् । सिनेमामा दुबै पतिपत्नीको भूमिकामा हुनेछन् । सिनेमामा अमिताभ बच्चनले पनि काम गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
मणिरत्नमले बनाउन लागेको यस सिनेमा एक चर्चित तमिल उपन्यासमा आधारित रहनेछ । सिनेमा ठूलो बजेटमा बन्नेछ । सिनेमाले एक त्यस्ती राजकुमारीको कथा भन्छ जसले राजासँग विवाह गरेर रानी बनेपछि शक्तिको चरम दुरूपयोग गर्न लाग्छिन् ।